Madaxweyne Mustafe Oo Qaaday Jidkii Cabdi Iley Iyo Odayaasha Jigjiga Oo Si Adag Uga Soo Horjeedsaday - Jigjiga Online
HomeArimaha BulshadaMadaxweyne Mustafe Oo Qaaday Jidkii Cabdi Iley Iyo Odayaasha Jigjiga Oo Si Adag Uga Soo Horjeedsaday
Jigjiga (JigjigaOnline) – Odoyaaasha Dhaqanka iyo waxagaradka ee magaalada Jigjiga ayaa ka soo horjeedsaday qorshe uu madaxweynaha Dawladda Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar ku doonayo inuu ku sameeyo tallaabo lagu nacay madaxweynihii ka horreeyey ee Cabdi Iley.
Madaxweynaha ayaa la sheegay in uu doonayo inuu kaga daydo madaxweynihii ka horreeyey ee Cabdi Maxamuud Cumar isku beddelka masuuliyiinta oo mid walba la geynayo deegaan aanu ka soo jeedin, taas oo shacabku ay hore usoo arkeen dhibaatadeeda.
Masuuliyiinta maamulka magaalooyinka iyo gobollada ayaa waxa uu madaxweynihii hore ee Cabdi Iley uu ku sameeyey nidaam uu ula baxay Dibu-curasho, taas oo meel kasta oo ilo-dhaqaale iyo manfac ku jiro uu ku geystay masuuliyiin ay ehel yihiin oo dadka madaxa kaga istaagtay, isla markaana aan dhibaato mooyee dheef laga arag.
Nidamka noocan ah ayaa sida hore loo soo arkay, waxa uu horseedaa in masuulka la geeyo deegaan aanu dhalasho ahaan kasoo jeedin, inuu ku mashquulo danihiisa iyo midka ehelkiisa oo aanu dadka deegaanka waxba u qaban, taas oo laga dheehan karo sida dadkii magaalada Jigjiga loogala wareegay hantidoodii ee dad kale oo ka yimid gobolladii ay masuuliyiintaasi kasoo jeedeen loogu wareejiyey dhulkii iyo meelihii muhiimka ahaa ee magaalada halka dadkii hore u lahaana shaadh dawladeed lagaga qaatay.
Hsddaba odayaasha dhaqanka ee magaalada Jigjiga ayaa waxay cadho ka muujiyeen astaantii ugu horreysay ee kasoo baxday madaxweynaha ee muujinaysa inuu raacay dariiqii Cabdi Iley, taas oo kasoo muuqatay isku-shaandhayntii uu dhawaan ku sameeyey xukuumaddiisa.
Madaxweynaha ayaa waxa uu maxkamadda Gobolka Faafan (Jigjiga) uu u magacaabay masuul kasoo jeeda deegaan kale, waxaana taas ka gilgishay odayaasha oo ku tilmaamay mid aan la aqbali karaynin oo ay u muuqanayso in madaxweynuhu uu sannad gudihii ku qaaday dariiq hore ay dadku dhibaatadiisa usoo arkeen.
Shacabka Jigjiga oo ah kuwa ay dhibaatadii ugu badnayd kasoo gaadhay xukuumaddii Cabdi Iley, ayaa waxay odayaasheedu ku doodeen in masuul kasta ay tahay inuu ka shaqeeyo deegaankiisa, sida dawladaha hoose iyo maxkamadaha.
Odayaasha oo iskugu soo baxay gudaha magaalada ayaa waxay intaa ku dareen in magacaabista Guddoomiyaha Maxkamadda gobolka Faafan ay tahay bilowga qorshaha qarsoon ee miiska madaxweynaha saaran ee uu ku hirgelinayo dibu-curasho.
Si kastaba ha ahaatee, nidaamka dawladeed ee dunida ayaa waxa goleyaasha deegaanka ee maamula degmooyinka iyo magaalooyinka lagu soo doortaa cod shacab, waxaana masuul kastaa uu ka shaqeeyaa deegaankii laga soo doortay oo sharciyan ah halkii uu dhalasho ahaan kasoo jeeday, laakiin nidaamka dibu-curashada ayaa waxa uu lid ku yahay arrintaas.